Wasiirka Caafimaadka Dowladda Puntland oo daahfuray isbitaal lagu daweynayo qaaxada nooca u adkaysta daawada | Puntland Ministry of Health
Wasiirka Caafimaadka Dowladda Puntland oo daahfuray isbitaal lagu daweynayo qaaxada nooca u adkaysta daawada
Wasiirka wasaaradda Caafimaadka Dowladda Puntland ayaa furay xarun lagu daweyn doono dadka qaba cudurka qaaxada gaar ahaan nooca iska caabida daawada ee loo yaqaan MDR TB. Wasiirka ayaa shacabka u soo jeediyey in ay isbitaalkan ilaashadaan, isbitaalkan oo noqonaya kii saddexaad ee laga furo guud ahaan Soomaaliya.
Dr Cali Xasan oo ah madaxa qaaxada ee wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa ka sheekeeyey baahida keentay in xaruntan laga furo Gaalkacyo, isagoo tilmaamay in baaritaan ay sameeyeen iyaga iyo WHO ay ku ogaadeen inay bateen tirada dadka qaba fayriska noocan ah iyagoo qabana ay daawo u raadsan jireen Hargeysa iyo Muqdisho.
Dr Cali Xasan ayaa sidoo kale codsi u diray dhakhaatiirta caafimaadka in qofkii ay ka heleen cudurkan in aanay daawo isaga qorin daawada ee ay si toos ah ugu soo diraan xarumaha lagu daweeyo cudurkan qaaxada.
Madax ka socdey hay’adda WHO iyo World Vision ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka Puntland ku garab taagan yihiin sidii xanuunkan loo xakamayn lahaa. Maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada oo ka soo qayb galay furitaanka Isbitaalka ayaa wasaaradda caafimaadka uga mahad celiyey furitaanka Isbitaalka baahiweyna loo qabey.